Iju Ojuju Iji Chọta Ndi IIT Na-eto eto ndi nwere IIM n'ime obi: Sundar Pichai - OZI
Kharagpur: Na-ekwenye na ọ na-eji klaasị klas n'etiti ụlọ ụbọchị ya na IIT Kharagpur, Google CEO Sundar Pichai na Thursday gwara ndị na-eto eto IITians ihe ọhụụ ịbanye n'ime IIMs dịka ọ na-echegbu onwe ya maka mkpa ọ dị inweta ahụmahụ dị mma.
Nkume Egwu: #news #tech
"Enwere nnukwu ibu ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị kwadoro ụkpụrụ niile na ọrụ gị (na India). Mgbe ị nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ị na-agụ akwụkwọ. O juru m anya nke ukwuu na ndị mmadụ n'otu n'otu na-abanye n'ime IIT na ngwa ngwa ha na-eche banyere IIM na wdg. Ọ bụ ihe dị oké egwu iji nweta ahụmahụ a pụrụ ichetụ n'echiche, "ka Pichai kwuru na nnọkọ kpụ ọkụ n'ọnụ na ndị IIT taa.
Laa azụ n'ala 23 mgbe ọ gwụsịrị B.Tech na 1993, o kwuru na ndị mmadụ na-etinye ego dị ukwuu na akwụkwọ ma na-agbanwe ihe mmụta.
Mgbe ọ na-echeta oge ọ bụla, ọ gara n'ụlọ nkwari akụ ya, zute ndị nkụzi ma jikọọ ya na nkwenye.
"N'ụzọ doro anya," ọ bụ azịza ya mgbe a jụrụ ya ma ọ bụrụ na ọ kụrụ klas.
"Anyị na-anọgidesi ike n'oge mgbede na n'ụtụtụ klas ụtụtụ," ka ọ tụlere.
Pichai kwuru na ọ na-eju ya anya na ọ na-ege ntị na ihe dịka ọkwa ọkwa asatọ malitere ịkwado maka IIT.
"N'etiti oge m, ndị mmadụ kwuru na onye a anaghị abanye n'ụlọ akwụkwọ a, nke ahụ bụkwa njedebe nke okporo ámá maka ya," ka ọ tụlere.
Ọ kụziiri ndị mmadụ ihe banyere ebe ọ na-aga akwụkwọ iji chọpụta ihe dị iche iche, pụọ n'èzí, na-eme ihe ziri ezi ma were obi ụtọ.
India, buru na dika o nwere ike, o kwuru, nwere ulo oru siri ike na ntuziaka dị ka ndị nlekọta na-atụle ya mgbe niile.
Na America, Pichai kwuru, na Stanford dịka ọmụmaatụ, na-edozi ịchọrọ majors nanị mgbe ha dị n'afọ gara aga.
Mgbe o kwusịrị B.Tech ya na ngwongwo na IIT, Pichai mere MS ya na Engineering na Materials Science si Mahadum Stanford na MBA si Wharton School ma sonye na Google na 2004.
Ọ bụ n'oge a na ihe kpatara ya na ya na nwa akwụkwọ ibe ya bụ Anjali na-enwe mmetụta na-enweghị isi na-enweghị mmerụ ma lụọ ya mgbe e mesịrị.
O nyochaa otú o si aga n'ụlọ nkwari akụ nke ndị na-eto eto izute ya ma wedata ya ala mgbe mmadụ ga-etisi mkpu ike, sị "Anjali Sundar na-akpọ gị".
N'ikpeazụ ka ọ na-ere ọkụ ruo afọ anọ pụrụ iche na mgbakwasị ụkwụ, o kwuru, sị, o nwere obi nkoropụ mgbe oge chọrọ ịpụ.
"Ọ bụ ihe ịtụnanya iji laghachi 23 afọ mgbe eziokwu ahụ gasịrị," Pichai ji ịnụ ọkụ n'obi kwuo.